पहिलोपटक शरीरमा ट्याटु खोप्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए ख्याल राख्नुहोस यी कुराहरु!
पछिल्लो समय कलाकार , खेलाडी एवम युवाहरुमा शरीरका विभिन्न स्थानमा ट्याटु खोपाउने प्रचलन बढ्दै गइरहेको छ । यो कुनै निश्चित समयवधिको लागि मात्र नभई पुरै जीवनभर नै आफ्नो साथमा हुने हुनाले शरीरमा ट्याटु खोपाउनु अघि एकपटक सोच विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ।
शरीरमा ट्याटु खोप्ने काम त्यति सहज काम भने पक्कै होइन। यसका लागि विभिन्न खतराको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसका लागि कुनै व्यवसायिक ट्याटु आर्टिस्ट र आकर्षक डिजाईनको ट्याटुको चयन गर्नु आवश्यक हुन्छ। यद्यपि गलत ट्याटु आर्टिस्ट र सुईले गर्दा इन्फेक्शनको खतरा हुने सम्भावना अत्यधिक हुने गर्दछ।
त्यसैले आज हामी यसै ट्याटु खोपाउने समयमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुको बारेमा केहि जानकारी दिदैछौँ। जसले गर्दा ट्याटुको अनुभव जीवनभरका लागि रहन सक्छ।
के साँचै ट्याटुको जरुरत छ ?
शरीरमा बनाईएको ट्याटु जीवनभर आफ्नै साथमा रहने भएकाले यसको जरुरत आफुलाई कत्तिको छ भन्ने कुरामा बिशेषत ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यसका लागि बिना सोचविचार कसैको लहै लहैको भरमा कदम अगाडी नबढाउनु नै उपयुक्त हुनेछ।
दुखाई सहन सक्ने क्षमता
कुनै पनि साथीले ट्याटु बनाएको देखेर त्यसैको लालचमा लागेर ट्याटु खोपाउनु गलत हो। किनकी शरीरमा यसको डिजाईन बनाउने समयमा आफुले यसबाट हुन सक्ने पीडाको सहन सक्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ। त्यसैले सुरुवाती चरणमा ट्याटु खोपाउदा सानो आकृतिमा बनाएर परिक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ।
ट्याटुको लागि राम्रो डिजाइनको चयन गर्नु पनि त्यति सहज काम होइन। यसका लागि बिशेष ध्यान दिनु पर्नेछ। किनकि शरीरमा खोपाईएको ट्याटुले बिभिन्ना प्रकारका अर्थ दिने गर्छ।
शरीरको कुन स्थानमा बनाउने
ट्याटु बनाउनु पुर्व शरीरको कुन भागमा ट्याटुको डिजाईन बनाउनु राम्रो हुनेछ त्यसमा पनि बिशेष ध्यान दिनु पर्दछ। शरीरको फरक फरक अंगमा दुखाई सहन गर्न सक्ने क्षमता समेत अलग अलग हुने गर्छ।
उपयुक्त आर्टिस्टको चयन
शरीरमा ट्याटुको विभिन्न डिजाईन बनाउनु अघि सहि ट्याटु आर्टिस्टको पनि चयन गर्नु आवश्यक हुन्छ। जसले डिजाइनको पर्फेक्ट फिनिस हुने र अधिक सुरक्षित समेत हुने गर्दछ।
त्वचामा हुन सक्ने इन्फेक्सनबाट बच्ने
पहिलोपटक शरीरको कुनै स्थानमा ट्याटु बनाउदा यसबाट त्वचामा हुन सक्ने इन्फेक्सनको सामना गर्ने सक्ने क्षमता हुनु आवश्यक छ।
पहिलो पटक ट्याटु खोपाउदै छु भन्ने कुराको डर नमानी निर्धक्कसंग ट्याटु आर्टिस्टमा भरोसा राख्नु अति आवश्यक हुन्छ।
प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ ०३, २०७६०७:५२